Sikorsky - S76 Nemeth FS2004 Thwebula
Incazelo 7 992
Usayizi: 44.84 MB
I Sikorsky S-76 helicopter uMoya umkhiqizo commercial ngumkhiqizi US Sikorsky Aircraft Corporation, kuyinto helico medium uyisithelo esiyisimanga. Inama rotors ezimbili ngamunye ne izindwani ezine kokwehla retractable gear.Superb add-on for FS2004 ngaphambi payware manje freeware kusukela 2011 by ... Funda kabanzi
Umbhali Nemeth Designs
Igama lefayela sikorsky-s76_nemeth_fs2004.zip
Sikorsky S-70A Pack V1 FS2004 HOT Thwebula
Incazelo 10 804
Usayizi: 20.46 MB
A gem real! unikezwe abanikeze asebenza nabo enhle virtual, 2d panel kanye siko umsindo, ephelele package.The S-70A iyona nguqulo ze- multi-mission Sikorsky lakhiwa Blackhawk. Ukuthunywa eyinhloko ye Blackhawk helicopter njengoba ezokuthutha impi kanye nokwesekwa yokudla, kodwa, ngaphezu, ... Funda kabanzi
Igama lefayela sikorsky_s-70a_pack_v1_fs2004.zip
Sikorsky S-55 Okusheshayo FS2004 Thwebula
Incazelo 5 888
Usayizi: 5.22 MB
Chofoza lapha ukuthola FSX i-variantHere ehambisanayo iyindiza enophephela emhlane kahle, iqondiswa yi-AlphaSim. Phambilini i-payware, njengoba i-2009 isiphenduke i-freeware, ngakho-ke kufanele usebenzise ithuba! Ukusebenza kwempahla enophephela emhlane enophephela emhlane, i-S 55 A H19 ekhiqizwe yinkampani yase-US Sikorsky, yenza i-opera yayo yokuqala ... Funda kabanzi
Igama lefayela sikorsky_s-55_whirlwind_alphasim_fs2004.zip
Sikorsky S-70 FireHawk HH-60F FS2004 Thwebula
Incazelo 5 433
Usayizi: 7.3 MB
Helicopter ukuze alwe umlilo. Lena phambili etendeni Sikorsky HH-Series 60F. Lokhu add-on iyatholakala nge ukwakheka eziningana ezahlukene. helicopter kunzima ukusingatha, silindele imibono evela kuwe! Unganqikazi ukuchaza okutholile. izivivinyo Good and izindiza okuhle, ukulwa ... Funda kabanzi
Umbhali Moore et Kirk Sunley
Igama lefayela sikorsky_s-70_firehawk _hh-60f_fs2004.zip
Sikorsky CH-124 Sea King HAR3A FS2004 HOT Thwebula
Incazelo 14 535
Usayizi: 9.39 MB
Helicopter insindiso ngesikhathi sea.Very nice, kodwa ezisindayo. Omunye repaint, intuthu, umnyango, alo amaphiko kanye anti-torque Rotor. Iyatholakala ngaphansi nomakhi: Westland e FS2004The Sikorsky CH-124 Sea King helicopter uhlobo wezempi anti-ngwenya yokuhlasela yebutho yenzelwe ukusetshenziswa osesikebheni. Kuyinto Vers Canadian ... Funda kabanzi
Umbhali Edwin Thurston Willy VERVAECKE
Igama lefayela sikorsky_sea_king_har3a_fs2004.zip
Sikorsky Pavehawk UH-60 FS2004 HOT Thwebula
Incazelo 15 459
Usayizi: 9.3 MB
Helicopter of quality ezehlukile, download manje. umsindo Superb nge 5 yokwenza, 2D panel kanye VC.The Sikorsky UH-60 Black Hawk kuyinto ezine-bladed, twin-engine, medium-lift Umbuso helicopter akhiwe Sikorsky Aircraft. Sikorsky zithunyelwe design S-70 United States Army sika Utility Tac ... Funda kabanzi
Umbhali Jordan Moore, uDave Eckert, Deane Baunton, uBrian McIntyre, Kirk Sunley
Igama lefayela sikorsky_pavehawk_uh-60.zip